Uganda Tour Operators vanochema kurasikirwa kweaimbova Sachigaro Everest Kayondo kuenda ku COVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Uganda Breaking News » Uganda Tour Operators vanochema kurasikirwa kweaimbova Sachigaro Everest Kayondo kuenda ku COVID-19
Nhau Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Uganda Breaking News • Akasiyana Nhau
Uganda Tour Operators vanochema kurasikirwa kwaEverest Kayondo
Aimbove Sachigaro weUganda Tour Operators (AUTO) Sachigaro, Everest Kayondo, akarasikirwa nehondo yake neCOVID-19 neChitatu, Chikumi 23, 2021. Nhau dzinosuruvarisa dzakaziviswa kumitezo nasachigaro weAUTO aripo, Civy Tumusiime, kuburikidza naDirector whatsapp forum.
Zvakasimbiswa pamusangano kuti Kayondo akashaya kuLifeline International Hospital iri muZana mumugwagwa unoenda kuEntebbe muUganda.
Kayondo akapinzwa muchipatara Mugovera wadarika chete.
Akanga ave paokisijeni kwemazuva maviri uye akatariswa zvakanyanya nemuzukuru wake uyo ari chiremba panguva yaaive kuLifeline International.
Muna 2019 saSachigaro, Kayondo akabudirira kukwikwidza mushandirapamwe we "Save Murchison Falls" mushure mekunge hurumende yatsigira marezenisi ekuvakwa kwedhamhu remagetsi paMurchison Falls National Park. Muna Zvita 2019, akatungamira boka revashanyi, vezvenhau, pamwe nevanoona nezvezvakatikwirisa kumusoro kwenzvimbo dzekupunzikira kwaakaita musangano nevatori venhau achida kuti Hurumende yeUganda ichengetedze maUhuru neMurchison Falls ari padhuze nepakavakirwa nharaunda. pamwe nehupfumi hwakananga uye husina kunangana kuUganda. Gurukota reMagetsi Injiniya, Irene Muloni, akasiiwa mazuva apfuura uye Gurukota rezvekushanya, Ephraim Kamuntu akaendeswa kubazi rezvemitemo.
Muna October 2020, Kayondo vakapinda muchiitiko che "Run for Nature", mumwe mushandirapamwe wekuponesa Bugoma Sango kubva pakuparadzwa neHoima Sugar Limited. Achitaura akamiririra AUTO mushure mekumhanya, sekunge ari kufungidzira zvichaitika kwaari, akati: "Chimbofungidzira kana corona yakaitika pasina chikafu mumisha. Hurumende yaizotipa sei chikafu? Aya ndiwo matambudziko anofanirwa kutarisirwa nehurumende vasati vapa sango. Takatotadza kufukidzwa nesango zvakakwana. Hatigoni kurasikirwa nezvimwe. ” Vakakumbira Bunyoro Kingdom, uko kune sango, kuti vafunge nezve sarudzo yekupa sango shuga.
Constantino Tessarin, Sachigaro weCommunity of the Conservation of Bugoma Forest (ACBF), akambomira kubva pazororo rake kuItaly achiti: “Ndakaverenga nezverufu rweshamwari yedu, VaEverest Kayondo, vaimbova Sachigaro weAUTO uye vanogara vakavhurika. mutsigiri wekuchengetedza. Hatigone kukanganwa mazwi ake panguva yekupedzisira 'Run For Nature' muna Gumiguru achikurudzira kumisa Hoima Sugar Company [kubva] pakuparadza Bugoma Forest. Vamwe havana kana kuenda kunonyara mhosva yekunyarara kwavo.
“Aive munhu akavimbika, chokwadi, uye aishanda nesimba kuvanhu vese vaaimirira. Ndoziva aive akarota kuUganda nevanhu vake. Zvinosuruvarisa kuti takarasikirwa nekuvapo kwake, takasuruvara zvakanyanya. Ndinoda kutenda VaKayondo nezvose zvakanaka zvavakaita uye ndinoshuvira kuti vaenderere mberi kunzvimbo inotevera yehupenyu hwavo. Tese tichamusuwa zvakanyanya. "Kayondo anga ari Sachigaro weAUTO kubva 2018 kusvika 2020 asi akasarudza kusatsvaga rimwe gore ramakore maviri muna Zvita 2."